Umkhiqizo ASIC chips Samsung - Blockchain Izindaba
Umkhiqizo ASIC chips Samsung
Samsung laqala ukuthola chips ASIC ngoba zemayini cryptocurrency
Esincintisana eyinhloko inkampani kule makethe zuza ku imishini izimayini kuze kube $ 400 million ngo ingxenye yesine.
South Korean Samsung oye wahlanganyela emsebenzini wokukhiqiza ASIC chips, ezisetshenziswa ukwenziwa bitcoins, ethers nezinye cryptocurrencies. Lokhu kulotshiwe TechCrunch ebhekisela ummeleli wenkampani.
Samsung manje umatasa yokukhiqiza chips thecryptocurrency. Nokho, we can not give more details about our customers. – Samsung PressOffice
Eyokuqala ngomsebenzi Samsung phezu chips wabavukuzi okwabikwa abezindaba-Korean. Ngokusho edition endawo The Bell, ekukhiqizweni ASIC chips Samsung Semiconductor isitshalo waqala ngoJanuwari 2018. Imithombo bathi Nhlangano isivele bavumelana uhlinzeke amathuluzi yetetimayini inkampani ongashiwongo ngegama kusuka China.
Ummeleli we-Samsung wenqaba ukuxoxa nge TechCrunch imininingwane umsebenzi chips ASIC.
Le ncwadi iphawula ukuthi Samsung has ancintisane microchip Taiwanese nomkhiqizi TSMC, okuyinto zuza ku nemishini yezimayini kusukela $ 350 million, kuze $ 400 million ngekota. Inkampani ukhonza enjalo abahlinzeki ezinkulu imishini yetimayini njengobe Bitmain nakwaKhanani Creative.
Ukulandela imiphumela 2017, Samsung baba nomkhiqizi chip ngobukhulu, displacing kusukela isikhundla umholi Intel. ibhizinisi Samsung sika ekukhiqizeni microchip 2017 kwaba $ 69 bhiliyoni kuqhathaniswa Intel $ 62.8 bhiliyoni.
Kungani e cou ezahlukene ...
Thumela Previous:Kanjani ukuqhuba ICO eSwitzerland
Thumela Landelayo:MasterCard sika-CFO: Cryptocurrency ukuthenga ekufukuleni ikhasimende imali yethu